6 ezinzulu (kwaye akunjalo) uzama ngobomi bukaPutin
Inani elipheleleyo lokuhlaselwa kweentloko zombuso alinakubalwa. Umnini-rekhodi kule nkalo nguFidel Castro, owazama ukubulala amaxesha angaphezu kwama-600. E-Rashiya, le meko ayinjalo, kodwa ukungabikho kwemibutho yabantu akuqinisekisi ukuba ukhuseleko olupheleleyo lomongameli. isayithi yenza ukhetho olunzulu (kwaye kungekhona) kwiPinin.
Umzamo oqaqambileyo ngobomi bukaPutin
Inzame yokuqala yokwenza uVladimir Vladimirovich yalungiselelwa ngo-2000 kwisixeko saseSt. Petersburg. Oku kwenzeka kwinyanga ngaphambi kokuba uPutin abekhethwe kuqala kwinkokheli yethu. Ngaloo xesha waqeshwa njengomongameli we-Russian Federation. Intloko ye-FSO Sergey Devyatkin yathi ulwaphulo-mthetho lwaluza kwenzeka emngcwabeni we-Anatoly Sobchak. Ukuzalisekisa abaququzeleli abacwangcisiweyo baqeshe ababini abaqhayisa, kodwa ngenxa yokusebenza okhethekileyo bakwazi ukuzincipha. Ngokuqinisekileyo, izilwanyana zaseTchchen zibandakanyeka kwimeko enomdla. Ngokumalunga nobuqu kunye nexesha lokubanjwa kwabantu abathinjwayo awaziwa.
Isiganeko senzeke kwiVotuzov Avenue, xa umqhubi weVladimir Vladimirovich wayedlula kuyo.
Imoto "uZhiguli" yaxoshwa ngumlimeli womongameli. Umqhubi weemoto zasekhaya akazange aphendule nayiphi na indlela kwiimxwayiso ze-FSO. Ngenxa yoko, umatshini womhlaseli wachaswa yi-jeep ehamba phambili. Ngokwezinye iingxelo, u-Alexander Pumaeane, ilungu legundane lezobugebengu, wayephethe i-Zhiguli eqhuba igqirha, umbulali kunye nomthengisi wezixhobo emgundini.
Ayaziwa into eyenzekayo emva kokubanjwa kwakhe, kodwa kamva igama lolwaphulo-mthetho labonakala lihlandlo eziliqela kwiimeko eziphakamileyo.
09 (10) .01.2001
Ngexesha elilandelayo isongelo lobomi bukaVladimir Putin lwagqitha ngo-2001 kwisixeko saseBaku. Iinkonzo ezikhethekileyo zaseAzerbaijan zixelele ukuba lo mdlali wayengumthubi we-Iraq uKyanan Rostam.
Umbulali wayeyaziwa ngokubanzi kwiindidi ezincinci, eziqeqeshwe e-Afghanistan kunye nokubulala ngokutsha ngokuphindaphindiweyo. Ngeli xesha, uRostam akazange akwazi ukufeza isicwangciso, wabanjwa waza wagwetywa iminyaka eyi-10 ngamagunya asekuhlaleni.
Inzame kuVladimir Putin, eyamkela uluntu jikelele, yavela ngo-2003. Amajelo anikezelwa ngolwazi ukuba abaphathi be-FSB no-Andrei Ponkin kunye no-Aleksei Alekhin badibana nomkhokheli we-lieutenant-colonel wenkonzo yezokuphepha u-Alexander Litvinenko ukuxoxa ngesicwangciso sokuphelisa intloko karhulumente engayithandiyo.
I-"chekists" ekhulelwe ukuba iyenze izenzo zamabutho aseMelika ngenxa yeemali ezithandwayo. Ngokwephephandaba laseBrithani I-Sunday Times, uBoris Berezovsky wayeza kuvela kwimeko - i-oligarch ehlazolekileyo efihla eLondon esuka ebulungiseni baseRussia.
Ngo-Oktobha 12, uPonkin no-Alekhine babanjwe kwaye bathunyelwa ukuba babuze imibuzo yamapolisa asekuhlaleni ngamacala okukhukula. Kwiveki kamva abavalelwayo bakhululwa ngenxa yokungabikho ko bungqina bobubungqina. Abaphathi be-FSB ngokwabo bakholelwa ukuba bexhoba lomdlalo wezopolitiko oqalwe ngu-colonel wangaphambili kunye ne-billionaire. Ngokudakisayo, intsapho yakhe yathi uVladimir Putin ngokufa kweLitvinenko.
Ngaloo mini, kucetywe ukubulawa kabini. Umongameli omtsha waseRussia (Medvedev) kunye nongqongqoshe (Putin) kwafuneka apheliswe ngumthonyama waseTajikistan, uShavelad Osmanov.
Kulo gumbi apho ugqirha lafihla khona, lafumana i-arsenal yonke yezixhobo. Ngokuqinisekileyo, wayezimisele ukwenza ukubulawa kwesibhamu ngokubonakala kweso sihlandlo xa uVladimir Vladimirovich kunye noDmitry Anatolyevich baya kudlula kwi-Asilyevsky Descent. U-Osmanov akazange amelane ngexesha lokuvalelwa, wahlawuliswa ngokufumana izixhobo ezingekho mthethweni, kodwa ulwazi malunga nomququzeleli kwaye umthengi wahlala ehleliwe.
Esinye sezihlaselo ezibi kakhulu kuPutin kwenzeka ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kokuba akhethe umongameli waseRussia okwesithathu. Ukulungiselela uchungechunge lokuhlaselwa kwamaphekula lwenziwa e-Odessa phantsi kolawulo lukaDoku Umarov. Inkokheli yamaqela aseChechen ahlukeneyo athunyelwa "kwisabelo" Ilya Pyanzin, uRuslan Madaev noAdam Osmayev. Ukuqhuma kwenzeka kwindlu apho amagorha ahlala khona kwaye agcina izixhobo zazo. UMadayev washona apho, kwaye uPyanzin waya esibhedlele, apho waqala ukunikela ubungqina bokuqala. Umgxeki uthetha malunga nokulungiswa kunye nokulungiselela ukubulawa kukaVladimir Putin. Ngophando, wanikela umlingane wakhe, owake wanyamalala ngexesha lomlilo.
U-Adam Osmayev wabuya evalelwe ngexesha lokusebenza okhethekileyo. Wayenxibelelwano phakathi kweenkampani kunye ne-Umarov, kunye nokubandakanya ngenxaxheba ekuqeshweni. Kwikhompyutheni yakhe yangasese yafunyanwa imiyalelo kunye nesicwangciso senkqubo esicacileyo, indlela yokuphazamisa umqhubi we-presidential motorcade.
U-Ilya Pyanzin wagwetyelwa eRashiya (iminyaka eyi-10 entolongweni), kwaye u-Osmayev wavivinywa kwintsimi yase-Ukraine. Ngo-2014, u-Adam wakhululwa, njengoko amanqaku anxulumene nobugandlo ayengabandakanywa kwimeko yakhe.
Kutheni ayenjalo ukuba intombi leyo isebenzise ezi zinto?
5 iindlela ezingaqhelekanga kunye nezindlela ezikhethekileyo zokukhahlela izicathulo: Awunakucinga ukuba kunokwenzeka
Amanqaku angama-5 aphezulu angabonakaliyo emhlabeni
Yintoni abantu bacinga ngayo nge-cellulite: Iimbono zeenkwenkwezi kunye nabafana abaqhelekileyo
Le jigsaw isetyenziswe ngabaqeshi baseJapan kunokuba badliwano-ndlebe. Ngaba uya kuqeshwa eJapan?
Indlela yokuchonga ikhono lomntu ngeminwe yeminwe
Macaroni yengqolowa yexesha
I-horoscope echanileyo ngokuchanekileyo
I-cocktail yaseLwandle kunye ne-spaghetti
Ukuguga kwangaphambili kwesikhumba
Amakhowe avela kumazambane
Ulusu luthinta njani amathambo kunye nokubhoboza?
Umculi owaziwayo u-Ivan Rosin
I-Berry Strata (i-Italian Pie)
Okroshka ukhilimu omuncu kunye ne-mayonnaise
Iintliziyo zentliziyo ezithandwayo kubasetyhini abakhulelweyo
Ngaba uncedo lobuqili kulwalamano?
Ukusetyenziswa kweziyobisi kunye nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi, isisitheliso esifihliweyo kunye esicace